ဗမာမှန်လျှင် ဆဲတတ်လိမ့်မည်…..။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » ဗမာမှန်လျှင် ဆဲတတ်လိမ့်မည်…..။
Posted by naywoon ni on Jun 18, 2012 in Cultures, Drama, Essays.., My Dear Diary, Society & Lifestyle | 29 comments
ဟုတ်တယ်ဗျ…။ ကျုပ်ပိုမပြောဘူး..။ ကြွားစရာလည်းမဟုတ်ပါဘူး…။ ဗမာနဲ့ အဆဲက ခွဲခြားလို့မှမရတာ…။ ဗမာလူမျိုးလောက် အဆဲသန်တာ… ထွင်ထွင်ကျည်ကျည်ဆဲတတ်တာ….။ ဘယ်လူမျိုး ကလိုက်လို့မှီိမလဲ…။ ရှိလည်းနဲနဲပေါ့ ….။ ဟုတ်ဘူးလား…။ ဗမာတွေ ပါးစပ်ကိုက ဆဲတာ အရသာတွေ့နေသလိုပဲ….။ ဟုတ်ချင်လည်း ဟုတ်မှာပေါ့….။ ကျုပ်က ရွာတွေ လှည့်သွားလာခဲ့ဖူးတော့ ဆဲတာလာက်ကတော့ အဆန်းတစ်ကျယ်မဟုတ်တော့ဘူး…။ လူကြီးရှေ့မှာသာ မခုတ်တတ်တဲ့ ကြောင်လိုလုပ်နေတာ ….။ အပေါင်းအသင်းကြားရောက်ရင်ဆဲတာပဲ…။ ယောက်ျားလေးတွေမှဆဲတာလား မဟုတ်ဘူး…။ ောင်မလေးတွေလည်း သူတို့အချင်းချင်းကျရင်ဆဲတာပဲ…။ ဆဲတာမှပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ်ကိုဆဲတာ…။ မယုံမရှိနဲ့…။ မန္တလေးမှာကျောင်းတက်တုန်းက အနားမှဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုပြီး သူတို့ချည့် လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆဲနေတာ…။ ကျုပ်ကအနား ရောက်သွားတော့ကြားလိုက်ရတာ…။ ကဲ ဆဲတာက တော့ အကြောင်းမဟုတ်ဘူး…။ ဘာလို့ဆဲလဲ…။ မကျေနပ်လို့ အလိုမကျလို့ တစ်ခါတစ်လေကျတော့လည်း ဘာအကြောင်းမှမယ်မယ်ရရ မရှိပဲ ဆဲလိုက်ကြတာရှိတာပဲ…။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်…။ သူ့ကိုသူကို သတိမထားမိပဲဆဲနေတတ်တာ…။ ကြည့်ဦးတွေ့တဲ့သူကိုနှုတ်ဆက်တာတဲ့…။
“ ဟေ့ကောင်ကြီး မသေသေးဘူးလား ငါက မင်းသေသွားပြီမှတ်တာ…။ ချီးမှပဲ ခုမှပေါ်လာတော့တယ်…။”
အဲဒိ ချီးမှပဲဆိုတာ ဆဲလိုက်တာပါ…။ အနားမှာရှိတဲ့ကျုပ်က
“ ဟေ့ကောင် ဆဲလှချည်လား” ဆိုတော့
“ ဟုတ်လား …။ ငါဆဲလိုက်မိလား”တဲ့…။ ကောင်းရော……..။ အဲဒိတော့ ဗမာတွေဟာ မေ့ပြီးတော့လည်း ဆဲတတ်တာပဲ…။ သိသိကြီးနဲ့လည်းဆဲလိုက်တာပဲ…။ တွေ့စ မရင်းနှီးခင်သာ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်လုပ်ချင်လုပ်နေမယ်…။ လည်ပင်းဖက်ပေါင်းရလောက်အောင် ရင်းနှီးလာပြီဆိုရင် ဆဲခံရပြီသာမှတ်ပေရော့….ပဲ..။ ဗမာတွေ ဘယ်ကတည်းကဆဲတတ်လာသလဲ ဆိုတော့ ကလေးပေါက်စ စကာားပြောတ်ကာစ ကတည်းက အဆဲ နဲ့ စကားပြောတတ်လာတာ…။ သင်ပေးတဲ့သူကလည်း သင်ပေးတယ်…။ ကလေးပေါက်စ မပီကလ ပီကလာနဲ့ ဆဲ တာကို သဘောကျ ကြတယ်လေ…။ မဆဲဖို့ တားမြစ်တဲ့သူလည်း ရှိတော့ရှိပါတယ်..။ ဒါပေမဲ့ ဆဲဖို့ သင်ပေးတဲ့သူက များနေတာကိုး..။ ကလေးကလည်း ဆဲတာကို သဘောကျနေတယ်..။ နားလည် လို့တော့မဟုတ်ဘူး..။ သူ့ကို သင်နေကျ သမရိုးကျ စကားစု တွေမဟုတ်တော့ အထူးအဆန်းလို်ပြောကြည့်နေတာ…။ လူကြီးတွေ မိဘတွေက သဘောကမကျတာကိုလည်း သဘောကျနေတာ…။ အဲဒိကတည်းကနေ အဆဲမျိုးစေ့ချလိုက်ကတာပဲ…။ နောက်တော့ တစ်စုံတစ်ခုကို သဘောမကျတိုင်း ဆဲနေမိတော့တာပဲ…။ ပထမတော့ နှုတ်ခမ်းလှုပ်ရုံ ဆဲတယ်..။ နောက် အသံထွက်ဆဲတယ်…။ သူ့ဒေါသ အတိုင်းအတာမြင့်လေ….. အသံပိုကျယ်ကျယ် ဆဲလေပဲ…။ တောရွာတွေမှာနေတဲ့ တောသူတောင်သားတွေက ပိုဆိုးသေးတယ်…။ မနက်မိုးလင်းကတည်း ဆဲလိုက်ကတမိုးကိုမွှန်လို့…။ အချင်းချင်းလို ဖြစ်နေကုန်တော့ ရှောင်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးလေ…….။ ယောက်ျားလေးတွေကလည်း မိန်းကလေးတွေရှေ့ မရှောင်ဘူး…။ မိန်းကလေးတွေကလည်း ယောက်ျားလေးတွေရှေ့ မရှောင်နိုင်ဘူး…။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆဲကြတာပဲ…။ တစ်ခါတစ်ရံ ဧည့်သည် လာတဲ့အချိန်လောက်ပဲ ရှောင်ကြတာ…။ ဒါတောင် မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဆဲပြီးမှ ကန့်တော့ လုပ်ချင်လုပ်သေးတာ….။ တစ်ကယ်တော့ ဆဲတာကို အကျင့်ပါနေကြတာပါ…။ ဘယ်သူ့ဘယ်သူက မှ မတားမြစ်ကြပါဘူး…။ လူတိုင်းဆဲနေကြတာဆိုတော့ အဆန်းတစ်ကြယ်လည်း မဖြစ်ကြပါဘူး…။ ရိုးနေပါပြီ…။ မြို့မှာနေဖူးတဲ့သူက သာ ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့ ဆဲတာ ရှက်သလိုလို ရွံ့့သလိုလို ဖြစ်နေကြတာ…။ မြို့ မှာကော ဆဲတဲ့သူမရှိဘူးလား ….။ ရှိတာပါပဲ…။ တောမှာလိုတော့ ခပ်ရိုင်းရိုင်း မဆဲကြဖူးပေါ့…။ အဲ လင်မယားချင်း ရန်ဖြစ်ရင်တော့ ရှိတာအကုန်ထုတ်ဆဲတော့တာပဲ…။ နေဝန်းနီ သူငယ်ချင်းကတော့ ပြောဖူးတယ်…။ ဆဲတာဟာ ဆင်းရဲတာနဲ့ ဒွန့်တွဲနေသတဲ့…။ ချမ်းသာတဲ့ သူထက် ဆင်းရဲတဲ့သူကပို ဆဲသတဲ့ …။ ဘာလို့လဲဆို သူတို့ မှာ မကျေနပ်ချက်တွေ အလိုမကျမှုတွေ ပိုဖြစ်လို့တဲ့…။ ကျေနပ်မှုတွေ အလိုကျမှုတွေ များလာရင် လူတွေ ဟ ဆဲတာ လျော့ ကျသွားသတဲ့…။ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးနော်…။
နေဝန်းနီတွေ့ဘူးတာကတော့ ဗမာတွေဟာ ချစ်ရင်လည်း အဆဲလေးနဲ့ ….။ နှုတ်ဆက်တတ်တာကိုပါ….။ ကျေနပ်ရင်လည်းဆဲတာပါပဲ…။ အဲ လေသံလေးတော့ ပြောင်းသွားတာပေါ့….။ အဲဒိဆဲတာကိုက ဘယ်နှစ်ရာစုလောက်ကတည်းက အမြစ်တွယ်နေမှန်းမသိတာ….။ သေချာတာကတော့ ဆဲရုံကလွဲပြီး တစ်ခြားမတတ်နိုင်လို့ လုပ်စရာမရှိလို့ ဆဲနေကြတာလို့ပြောရမယ်နဲ့တူရဲ့…။ နေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်နေကျ သမရိုးကျ အလုပ်ထက်ပိုပြီး လုပ်စရာ ကိုင်စရာမရှိ ပြီးတော့ လ္ဘက်ရည်ဆိုင် ဘီယာဆို်မှာ အချိန်ကုန်…။ လမ်းဘေး ဇယ်တော်ခုံ ဘိလိယက်ခုံမှာ အချိန်ဖြုန်းနဲ့ ဒီထက်နဲနဲ ဆိုးတာက နှစ်လုံး သုံးလုံး ထိုးးရင်းမကျေနပ်တာ အဆင်ပြေတာ ကိုထင်သလိုဖြစ်မလာတိုင်းဆဲနေကြတော့တာ….။ အလုပ်လား ….။ရန်ကုန်မန္တလေး မြို့ကြီးတွေမှာ အချိန်လုပြီးလုပ်နေကရတာပါဗျာ …။ နယ်မှာ လာကြည့် လက်ဆွဲပြမယ်…။ အလုပ်တွေ လုပ်စရာမရှိလို့ အချိန်တွေ ပိုနေတဲ့သူတွေ….။ အဲဒိတော့ မကျေနပ်တိုင်း လေတိုက်တိုင်း ဆဲနေကြတဆန်းသလား …။ တစ်ခြားဘာ မှမှ မလုပ်နိုင်တဲ့ဟာ ဆဲတာနဲ့ပဲ အနိုင်ယူလိုက်တာပေါ့….။ ဗမာစကားလည်း ရှိသား “ အောက်ကသာရောက်နေတာ ….. ငါ့ -ီး က တစ်ပြားမှမလျာ့ဘူး” ဆိုတာလိုပဲ….။ အဲဒိတော့ …………
နေဝန်းနီ သူငယ်ချင်းကတော့ ပြောဖူးတယ်…။ ဆဲတာဟာ ဆင်းရဲတာနဲ့ ဒွန့်တွဲနေသတဲ့…။ ချမ်းသာတဲ့ သူထက် ဆင်းရဲတဲ့သူကပို ဆဲသတဲ့ …။ ဘာလို့လဲဆို သူတို့ မှာ မကျေနပ်ချက်တွေ အလိုမကျမှုတွေ ပိုဖြစ်လို့တဲ့…။ ကျေနပ်မှုတွေ အလိုကျမှုတွေ များလာရင် လူတွေ ဟ ဆဲတာ လျော့ ကျသွားသတဲ့…။ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးနော်…။
သုနောင် မန်း says:
ဆဲတယ်ဆိုတာ ငယ်ငယ် ကလေးအရွယ်တုန်းက လူကြီးတွေက ကလေးတွေရှေ့မှာလဲ ဆဲကြတော့ ကလေးဆိုတာ လူကြီးတွေ ပြောတာ ဆိုတာတွေကို လိုက်ပြီး အတုယူလာတာဆိုတော့ ဆဲတတ်ကုန်တော့တာပေါ့ တစ်ကယ်ဆိုရင် လူကြီးတွေက အသိရှိပြီးသားတွေ ဆဲတယ်ဆိုတဲ့ အရာဟာ အများ မကြိုက်တဲ့ အရာဆိုတာ သိနေပြီးပဲ ကလေးတွေကို ဆဲတာကို သိသာသိစေပြီး မဆဲစေဖို့ ငယ်ငယ်ထဲ အလေ့အကျင့် လုပ်ပေးထားသင့်တယ်…အဲဒါမှ လူကြီးဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှာ ဆဲတဲ့ အကျင့်လဲ ပျောက်သွားမယ်..
ဆဲတတ်တယ်ဆိုတာ ကျင်လည်နေရတဲ့ပါတ်ဝန်ကျင်နဲ့လည်း ပက်သက်နေတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
ဆင်းရဲတဲ့သူတွေက ခံစားချက်တွေ၊ ရုန်းကန်ရတာတွေနဲ့ ပင်ပန်းတော့ စိတ်တိုလွယ်ကြတာပေါ့။
ဒါပေမဲ ့တားတားလဲတချက်တချက် သတိလွတ်ပြီးဆဲမိတယ်
ဗမာမှန်လျှင်ဆဲတတ်တယ်ဆိုတော့ တခြားလူမျိုးတွေရော မဆဲတတ်ဘူးလား……..ပြောပါဦး
ဆဲတာ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိ …
ကြုံလို့ ပြောရရင် ငယ်ငယ်က လှေလှော်တဲ့ကာလပေါ့…
ကျုပ်တို့ ဘုတ်ကလပ် ကတော့ ဆြာတပည့်
ကလေး လူကြီး မရွေး ..စကားပြောရင်
နှုတ်ဆက်ရင် …ငါ့လခွား က စပြောတယ်…
ဖက်ရှင်ကို ဖြစ်လို့ ….
ငါ့လခွား လာထား ၁၀
အိုဘယ့် လွမ်းပါဘိတောင်း … တက္ကသိုလ် ဘုတ်ကလပ်ရယ်..
အော်ဆဲတယ်ဆိုတာ လဲ ဗမာမှ ဆဲတတ်တာ ဟုတ်ပါဘူး ….
လူမျိုးစုံဆဲတတ်ကြတာပါ …ဗမာလူမျိုးက စကားပရိယာယ် ကြွယ်ဝတော့ ဆဲနည်းပိုစုံသလိုဖြစ်တာပေ့ါအေ…
နိုင်ငံခြာ်းမှာ ဆို တစ်လုံးတည်း ဆဲတတ်တာ…ဗမာတွေက အဲတစ်လုံးကို ဝေါဟာရာကြွယ်ကြွယ်နဲ့ အဓိပ္ပာယ်အစုံဖွင့်ဆဲတာ..
english လို die သေသည်.. ကဲ ဗမာတွေက နတ်ရွာစံသည်..ကွယ်လွန်သည်. အနိံစ္စရောက်သည်၊ ပျံလွန်တော်မူသည် ..ဘာညာဘာညာ ဆိုပီး မျိုးစုံအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြတာဆို တော့ ဆဲ တာ လဲ အဲလိုပဲနေမှာပေါ့ ..
ဒါပေမယ့် ဗမာတိုင်း ဆဲတတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး…မဆဲတတ်တဲ့ဗမာတွေလည်း ရှိပါတယ်အေ..
နာ တို့ တော့ ဆဲတတ်ဘူးအေ..စိတ်တိုရင် ထပီး ထုလိုက်တာပဲ .. ပါးစပ်က ပြောတတ်ဘူး .. အဲလို ယဉ်ကျေးတာ …
.. တရုတ်မ၂ယောက်ရန်ဖြစ်တာ.. တရုတ်လိုအပြန်အလှန်ဆဲနေကြရင်း.. နောက်ပိုင်း..ဗမာလိုပြောင်းဆဲကြသတဲ့..
‘A Big F—ing Deal’: Biden’s Health Care Reform F-Bomb On Live TV …
May 23, 2010 – Vice President Joe Biden, perhaps overcome with excitement during … television when he turned to Obama and said, “This isabig fucking deal.
မနေ ့ညကမှ နီဂရိုး ရပ်ပါ မင်းသားအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “ xxx ” ကားကို ဘယ်နှစ်ကြိမ်မြောက်မှန်းမသိဘူး ပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ် ။ အမေရိကန်သမ္မတ ကို ဖမ်းသွားတာကို ပြန်လိုက်ကယ်တဲ့ကား ။ ဗီလိန် က စပိုက်ဒါမန်း ဒုတိယကားထဲက ဗီလိန် ၊ အဲ့ကားထဲမှာ သမ္မတကြီး ကို ဖမ်းသွားပြီး ၊ ရထားပေါ်တင်တော့ ၊ အမေရိကန်သမ္မတ က လူဆိုးကြီးကို
“ ဖက်ယူ ” တဲ့ ။ ကျုပ်ဖြင့် စဉ်းစားလို ့ကို မရဘူး ။ တိုးတက်နေတဲ့ အမေဒစ်ကားမှာ ဖက်သုံးသေးလားလို ့။ ဟီဟိ
ဒီပိုစ့်ကိုတော့ လုံးဝမထောက်ခံပါဘူး.. ဗမာမှန်ရင်ဆဲတယ်ဆိုတာလည်းမမှန်ပါဘူး။ မဆဲတတ်တဲ့ဗမာတွေ
အများကြီးပါပဲ ကိုနေဝန်းနီရယ်။ ဆဲတာတွေကို နေ့ရှိသရွှေ့ကြားနေရပါတယ်။ ယောက်ျားလေးအများစုက
တော့ အဆဲလေးတွေပါကြပါတယ်။ ဗမာမှန်ရင်ဆဲတယ်လို့ လုံးပြီးပြောရင်တော့ ဗမာသိက္ခာကျပါတယ်။
ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ်သိက္ခာမချပါနဲ့။ အမေရိကန်တွေလည်းဆဲပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ တချိန်လုံး Fuck you ချင်းကိုထပ်နေတာပါပဲ။
လူမျိုးနဲ့က ဆိုင်ပါ့မလားတော့ မသိ၊ eng; ကားကြည့် ပါလား မိုးမွန်နေတာပါပဲ။ what the hell ,fx တွေက မကြားချင်အဆုံးပဲ၊ skynet ကလာတဲ့ masterchef တို့ project runway တို့မှာလဲ တတီတီနဲ့ ဖြတ်ထားရတယ်လေ၊ မြန်မာတွေကတော့ ဆဲတာမဟုတ်ပဲ အာလုပ်စကားလိုု့တောင် ပြောရမလိုပါပဲ။
ငါ– ခွီး တော်တော်ရေးတတ်တဲ့ နေဝန်းနီ ဗျား။
ဗမာမှန်ရင် ဆဲတတ်လိပ်မည် တဲ့ — ၊
လူမျိုးတိုင်း ၊ဘာသာတိုင်းမှာ သူ့ဘာသာစကားနဲ့သူ အဆဲအပြောကလေးတွေ ရှိပါ့ ၊ အနဲအများ သာ ကွာ တာပါဗျား။ ဒေါသနဲ့ဆဲဖြစ်တာ၊ချစ်လို့ဆဲတာ၊ ဖေဖေဂျီးရေလို့ခေါ်နေတဲ့ကြားမှ အသားယူတဲ့ပြီး ကိုယ့် ခလေးကိုယ်ချစ်စနိုးနှင့် –မအေးပေးလေး လို့ပြော တာ ၊တစ်ချို့ဆဲခံနေကျ ဆရာတပည့် တွေဆို ဆရာမှ တစ်ရက်လောက်မဆဲတော့ရင်ကို စားမဝင်၊ အိပ်လို့ မပျော် ရင်ထဲ ဟာတာတာ ဘာလိုမှန်းမသိဆိုပဲ။ အဆဲကြောင့် အသက်အန္တရာယ်ထိအမုန်း ပွါးကြရတတ် သလို၊ အဆဲကြောင့် ပိုမိုနွေးထွေးခင်မင်စေတာ လည်းရှိတယ်၊နေရာ၊ဒေသ၊အခြေအနေ၊ပေးသူ၊ယူသူပေါ်စိတ်ကြေနပ်မှု၊ မကြေနပ်မှုဖြစ်စေတယ်။
သည်တော့ဆဲပြောတာကလေး အချစ်များစေသလို၊အချင်းပွါးစေ တာလည်းရှိသမို့ သုံးတတ်လျှင်ဆေး၊ မသုံးတတ်လျှင်တော့ ဘေးတဲ့ဗျား။
ဗမာပီပီ ကျုပ်လည်းအဆဲကလေး တစ်ခါတစ်ခါ ပါတတ်သပေါ့ — အဲ ကိုယ် နိုင်ရတဲ့သူ/ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ သူ ကိုပဲ ဟဲ ဟဲ ။
မှန်တော့မှန်တယ် နေဝန်းနီ ရေ…ဒါပေမယ့် အရမ်းမှန်လို့ထင်တယ် ဖတ်ရတာကတော့ သိပ်ပြီးမနှိပ်လှဘူး ငါ–ခွီး တယ်မှပဲကွာ။
ခေါင်းစဉ်က “ဗမာမှန်လျှင် ဆဲတတ်လိမ့်မည်” ဆိုတော့ပြောကြည့်မယ်၊”ဗမာမဟုတ်ရင်မဆဲတတ်ဘူး”
“မဆဲတတ်ရင်ဗမာလူမျီုးမဟုတ်ဘူး”…ထားပါတော့လေ..ပေးချင်တဲ့ Massage ကဘာလဲ…ဆဲဖို့အားပေးတာလား
ဗမာမှန်ရင် ဆဲတတ်တယ် ဆိုတာကတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး
ဆဲတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ကောင်းတဲ့အလုပ်မှ မဟုတ်တာ
အဲဒီမကောင်းတဲ့ အလုပ်ကိုမှ မြန်မာလူမျိုးမှန်ရင် လုပ်တတ်တယ်ဆိုတော့ မဆဲတတ်ရင် ဗမာမလုပ်ရတော့ဘူးလား
ဒေါသထွက်ရင်တောင် အဆဲလေးကို ရှောင်ပြီးပြောတတ်ရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ
တခါတလေတော့လည်း ရင်းနှီးလို့ ချစ်ခင်လို့ ဆဲသွားတာကမှ ခံနိုင်သေးတယ်။
မလိမ့်တပတ်နဲ့ ယဉ်ယဉ်လေး ပြောသွားတာက ဆဲတာထက် ခံရခက်တာတွေ ရှိသေးတယ်။
နာအောင်ပြောချင်ရင်တော့ လှလှပပလေးပြုံးပြီး စကားလုံးလှလှလေးတွေသုံးပြီး
တစ်ခါတည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်သေချင်စိတ်ပေါက်သွားအောင် ပြောလို့ရတယ်နော် ;)
လိမ္မော်ရောင် ဟော်လန် ဘောလုံးအသင်းသည် ၂၀၁၂ခုနှစ်အတွင်း
ကမာ္ဘ့အဆင့် ပြိုင်ပွဲကြီးများတွင် အလွန်အင်မတန် မြင့်မားသော
ခြေစွမ်းဖြင့် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ကျစ်လစ်သိပ်သည်းလှသော
နောက်တန်း ဖန်တီးမှုစွမ်းရည် မြင့်မားလှသော ကွင်းလည်နှင့်
ထက်မြက်လှသော တိုက်စစ် တို့ ကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကာ အားပေးသူ
ပရိတ်သတ်အပေါင်း အား လွန်စွာ စိတ်ကျေနပ်မှု ပေးစွမ်းနိုင်ခဲ့ပြီး
ဘောလုံးရာသီ အပိတ်တွင် စုစုပေါင်း ရှုံးပွဲ-၃ ပွဲသာကြုံခဲ့သည်အထိ
အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့် ဖြတ်သန်းခဲ့လေ သတည်း…။
ဟုတ်တယ်ဗျ ဆဲတာတစ်ခုမှမကောင်းဘူး ပြောပြမယ်နားထောင် ဘာမကောင်းလဲဆိုတာ ဒီနေ့မိုးရွာတာထီးမပါလို့ ကိုယ့်ပါသာဘူလာတာကို အခြောက်တစ်ကောင်နဲ့တွေ့တာ ရိသဲ့သဲ့နဲ့ အဆင်လေးတဲ့လေ.. စိတ်တိုလာတော့ ငါ -ိုးမသားလို့ ဆဲမိတာ လာလေတဲ့လေ ကောင်းကြသေးရဲ့လား
၂ကျပ်ထပ်ပေးခဲ့တယ် ဘိုနီ ရေ ။
အနက် ( မောင်နီ..လည်းသွား)
တပ်မ77 ဒါမျိုးတော့ တယ်တတ်ပါလား
ခေါင်းစဉ် က လူမျိုးရေး ခွဲခြားတယ် လို့ထင်တယ်ဗျာ .. အာဟိ ..
လူ မှန်ရင် ဆဲတယ် ဆိုတာလေး … အလယ်အလတ် ပေါ့ဗျာနော့ …
အဲ နေဥိးဗျ … ဆဲ တဲ့ သူလဲ ရှိမယ် . မဆဲ တဲ့သူလဲရှိမယ် .. ဆဲဘူး တဲ့လူလဲ ရှိမယ် မဆဲ ဘူးတဲ့လူလဲရှိမယ်။ ဆဲလေ့ရှိတဲ့သူလဲ ရှိမယ် ..ကြုံ မှ ဆဲတဲ့လူလဲ ရှိမယ် .. မယ် … မယ်.. မယ် …။
မအိပ်သေးဘဲ ဘာတွေ ရန်ထောင် နေတာလဲ။
ဒါမှမဟုတ် အိမ်မက်ကနေ တရေးနိုးယောင်ပြီး ဝင်လာတာလား၊
ယူရို ကိုက်နေပါကြောင်း …
ဆဲတယ်ဆိုတာက လူတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားမှု၊ စိတ်အခြေအနေကို တိုက်ရိုက်ဖော်ပြတာမို့…
ဆဲခြင်းဆိုတာကို လူတစ်ယောက်ရဲ့မွေးရာပါ လူ့အခွင့်အရေးလို့ယူဆပါတယ်… အတွေးကန့်လန့်ကြီးဖြစ်နေလဲပြောကြနော်…
အမေရိကန်တွေလဲဆဲတယ်… ပြင်သစ်တွေလဲဆဲတယ်… အာဖရိကကလူမဲကြီးတွေလဲဆဲတယ်… ကနေဒါကကောင်မလေးချောချောလေးလဲဆဲတယ်… အီတလီမဝဝတုတ်တုတ်လေးလဲဆဲတယ်… ဖိလစ်ပင်းမဘွားတော်ကြီးလဲဆဲတယ်… မြန်မာပြည်က ကြောင်ဝတုတ်လဲဆဲတယ်…
ထမင်းစားခန်းထဲမှာဆဲတယ်… ကော်ဖီဆိုင်မှာဆဲတယ်…အစည်းအဝေးခန်းထဲမှာဆဲတယ်… မကျေနပ်ရင် ရုံးရှေ့မှာ နှစ်ယောက်ချင်းထွက်ဆဲတယ်… အင်္ဂလိပ်လိုဆဲတယ်… မြန်မာလိုဆဲတယ်…
ထပ်ပြောရရင် လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ မွေးရာပါလူအခွင့်အရေးပဲ….